सांसद बन्ने वामदेवको योजनामा अवरोध बन्नेहरूलाई के भन्छिन् पत्नी तुलसा ? - Dainik Nepal
सांसद बन्ने वामदेवको योजनामा अवरोध बन्नेहरूलाई के भन्छिन् पत्नी तुलसा ?
दैनिक नेपाल २०७५ असोज २६ गते ७:०१
काठमाडौं, २६ असोज । चौतर्फी आलोचना भएपछि वामदेव गौतम उपचुनावमाफर्त संसद्मा छिर्ने योजनाबाट पछि हटेका छन् ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि तीब्र आलोचना भएपछि केही शीर्ष नेता र आफू निकट नेतासँगको परामर्शपछि गौतमले सांसद् बन्ने योजनाबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
उनले सम्भवत शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने छन् । ‘समय, परिस्थिति र भूगोल छनौट पनि उपयुक्त नभएको, चुनावमा लड्ने योजनाले पार्टी र स्वंम वामदेवमाथि आक्रमण तीव्र भएकोले अब उहाँ प्रतिनिधिसभामा जाने विषयमै पुनर्विचारको अवस्थामा पुग्नुभएको छ’, गौतम निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले अब वक्तव्यमार्फत आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ।’
पार्टी एकताको सुत्रधार आफू प्रतिनिधिसभामा नुहँदा संसद् र सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै गौतमले सांसद् प्रवेशलाई महत्व दिएका थिए । संसद् प्रवेशको उनको चाहलाई पार्टीभित्रै धेरै नेताले ‘शंका’ को दृष्टिले हेरेका छन् । उनले सम्भवत शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने छन्।
महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमलाई भेटेर अवस्था अनुकुल नरहेकोले उपचुनाव लडने कुरामै पुनर्विचार गर्न सुझाएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिट गुम्ने अवस्थामा पार्टीले उपचुनावको निर्णय नलिने बताइसकेका छन्।
गौतम पत्नी तुलसा थापाले भने यो विषयमा पार्टी निर्णय कुरेर बसेको बताएकी छन्। ‘बर्दिया चुनावको परिणामपछि उहाँले पार्टीमा मैले के गर्ने, जिम्मेवारी के हुने भनेर कुरा उठाउनु भयो होला, त्यसपछि यी कुराहरू आइरहेका हुन्। पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यसपछि नै अरु कुरा हुन्छन्’, प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेकी वामदेव पत्नी तुलसाले भनिन्।